कस्तो अवस्थामा निकालिन्छ मिर्गौला ? | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home स्वास्थ्य कस्तो अवस्थामा निकालिन्छ मिर्गौला ?
कस्तो अवस्थामा निकालिन्छ मिर्गौला ?
२०७४, २३ असार शुक्रबार २०:५०
सितापाइलास्थित मनमोहन मेडिकल कलेजले नुवाकोटका ३२ वर्षीय शिवप्रसाद रिमालको पत्थरीको अपरेशन गर्दा मिर्गौला नै निकालिदिएको विषय अहिले चर्चामा छ । धेरैले यसमा अस्पतालको लापरवाही भनेका छन् भने पीडित पक्ष क्षतिपूर्ति माग्दै न्यायको लडाईंमा छ ।
कस्तो अवस्थामा मिर्गौला निकालिन्छ वा निकाल्नु पर्छ ? हामीले यो प्रश्न राष्ट्रिय मिर्गौला उपचार केन्द्र बनस्थलीका कार्यकारी निर्देशक डा. ऋषिराम काफ्लेलाई सोधेका थियौं ।
काफ्लेका अनुसार मिर्गौलामा कुनै रोग देखिएमा, संक्रमण भएमा, ठूलो पत्थरी भएमा, चोटपटक लागेमा वा क्यान्सर भएमा मिर्गौला ड्यामेज हुन्छ । मिर्गौला ड्यामेज भएमा प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने हुन्छ वा मिर्गौलाले कामै गर्न छाडेमा शल्यक्रिया गरिन्छ । माथिका यी अवस्था नदेखिएसम्म मिर्गौलाको शल्यक्रिया गरिँदैन । शल्यक्रिया गर्नुभन्दा अघि बिरामी र उसको नजिकको आफन्तलाई बिस्तृतमा जानकारी गराइन्छ । बिरामीको स्वास्थ्यको अन्य अवस्था जाँच गरेर शल्यक्रिया गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने लागेमा बिरामी र उसको आफन्तसँग अनुमति मागिन्छ । त्यसपछि मात्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी शल्यक्रियाको काम सुरु हुन्छ ।
जतिबेला शल्यक्रिया गर्ने भनिएको हुन्छ, विरामीको अवस्था, रोगको अवस्था हेरेर नै चिकित्सकहरुले आवश्यक निर्णय गर्दछन् । त्यस्तो अवस्थामा विरामीले चिकित्सकलाई नै भगवान सम्भिmने गर्छन् र रोग ठीक हुने विश्वासमा आफ्नो सम्पूर्ण शरीर नै उनीहरुलाई सुम्पिने गर्छन् । यस भरोसामा डाक्टरले विरामीलाई ठीक पार्छ । तर, कहिलेकाहीँ सबै शल्यक्रिया चिकित्सकले सोचे जस्तो भइदिँदैनन् र जटिलता उत्पन्न भइदिन्छ । र, बिरामीको ज्यान जोखिममा पर्दछ ।
विशेषगरी, मिर्गौलामा पत्थरीको शल्यक्रिया गर्दा यस्ता जटिलताहरु आउने गर्छन् । चिकित्सकहरुले मिर्गौलामा पत्थरी भएको त पत्ता लगाउँछन् । तर उक्त पत्थरीले मिर्गौलामा कत्तिको गहिरो घाउ पारेको छ भन्ने कुरा शल्यक्रिया नगरी थाहा हुँदैन । जब पत्थरी निकालिन्छ, त्यतिबेलामात्र उक्त पत्थरीले मिर्गौलामा कत्तिको घाउ बनाएको छ भन्ने थाहा हुन्छ । कहिलेकाही मिर्गौलामा भएको उक्त पत्थरीले मिर्गौलामा रक्त प्रवाह गर्ने मुल रक्तनलीलाई नै थिचेर राखेको हुन्छ । जसका कारण मिर्गौलामा गहिरो घाउ हुन्छ । जब उक्त घाउ भएको ठाउँबाट पत्थरी निकालिन्छ, मिर्गौलाबाट रक्तश्राव हुन थाल्छ ।
‘घाउ सामान्य अवस्थामा भए सिलाएर पनि रक्तश्राव रोक्न सकिन्छ । तर कहिलेकाहीँ घाउ यति गहिरो तथा कुहिसकेको अवस्थामा हुुन्छ की त्यस्ता घाउको चाहेर पनि उपचार गर्न सकिदैन । त्यस्तो अवस्थामा विरामीको ज्यान बचाउनको लागि चिकित्सकसित हुने एउटैमात्र विकल्प भनेको मिर्गौला निकालेर फाल्नु हो,’ डा. काफ्लेले भने ।
यसरी मिर्गौला निकाल्दा अर्को मिर्गौला ठीक रहेको खण्डमा मात्र चिकित्सकले खराब मिर्गौला निकाल्ने गर्दछन् । यदि कुनै व्यक्तिको शरीरमा एउटामात्र मिर्गौला छ भने पनि त्यसको बायोप्सी समेत गरिँदैन । किनकी एउटा मिर्गौलाले काम गरेमा व्यक्ति बाँच्न सक्छ, तर मिर्गौला नै नरहेमा उसको ज्यानै जान सक्छ । त्यस्ता संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्नु चिकित्सकको कर्तब्यभित्र पर्दछ । त्यतिमात्र होइन त्यसरी मिर्गौला निकाल्नु परेको अवस्थामा चिकित्सकले पहिले नै विरामीका परिवारलाई यस्ता जटिलताबारे पहिले नै अवगत गराउनुपर्छ ।
नेपाल मावन अंग प्रत्यारोपण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठले डाक्टरले बिरामीको ज्यानसँग खेलवाड नगर्ने बताए । तर, उपचारको क्रममा कहिलेकाहीँ तलमाथि हुनुलाई उनले भवितव्यको संज्ञा दिए । मिर्गौला झिक्नुपर्ने अवस्थालाई भने उनले चिकित्सा बिज्ञानको सामान्य प्रक्रिया भने ।
‘चिकित्सकीय विज्ञानले समेत विरामीको ज्यान बचाउनु चिकित्सकको पहिलो कर्तव्य हुने बताउँछ । त्यसअनुसार अत्याधिक रक्तश्राव भएमा विरामीको ज्यान बचाउन पनि मिर्गौला झिक्नु पर्ने हुनसक्छ, जुन चिकित्सा विज्ञानमा सामान्य मानिन्छ,’ नेपाल मावन अंग प्रत्यारोपण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठले भने ।
उनले चिकित्सा विज्ञानमा यस्ता समस्या आइरहने बताउँदै यसलाई सामान्य रुपमा लिन समेत सरोकार सबैलाई आग्रह गरेका छन् ।
के हो मनमोहन मेडिकल कलेजको घटना ?
अत्याधिक कोखा दुखेपछि गत जेठ २२ मा नुवाकोटका ३२ वर्षीय शिवप्रसाद रिमाल उपचारको लागि मनमोहन अस्पताल गएका थिए ।
उनको मिर्गौलामा पत्थरी देखिपछि चिकित्सकहरुले अस्पताल भर्ना गरे ।
उनको बायाँतर्फको मिर्गौलामा दुई सेन्टिमिटर लामो पत्थरी देखिएको थियो । उनको बायाँ तर्फको मिर्गौला सामान्य भन्दा तल मुत्रथैली नजिकै रहेको देखिएको थियो । मिर्गौला सामान्यभन्दा फरक ठाउँमा रहेकोले शल्यक्रिया जटिल हुनसक्ने भन्दै अस्पताल प्रशासनले परिवारका सदस्यलाई जानकारी गराएको थियो । परिवारका सदस्यले पनि भवितव्य आइपरे अस्पताल र चिकित्सक जिम्मेवारी हुने छैनन् भनेर सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
त्यसपछि रिमालको गत जेठ २५ गते शल्यक्रिया गरियो । शल्यक्रियाका क्रममा मिर्गौलाबाट अत्याधिक रक्तश्राव भएपछि ज्यान जोगाउन परिवारकै सहमतिमा उनको एउटा मिर्गौला निकालिएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरुको दाबी छ । तर मिर्गौला झिकेको करिब एक महिना पछिमात्र विरामी रिमालले आफ्नो एउटा मिर्गौला नभएको थाहा पाएको बताउँदै आएका छन् । उनले आफ्नो मिर्गौला झिक्नु पर्नाको कारण माग गर्दै ५० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दावी गर्दै आएका छन् ।
रिमालले आफ्नो मिर्गौला अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग भएको हुन सक्ने आरोप लगाएका छन् जसको अस्पतालले खण्डन गर्दै अस्पतालमै सुरक्षित रहेको बताउँदै आएको छ ।
अस्पताल र पीडित पक्षबीच भएको सम्झौतामा विरामीलाई अर्को मिर्गौला फेर्न आवश्यक परे फेरिदिने, जीवनभर उपचार निःशुल्क गरिदने, हालसम्म लागेको औषधि लगायतका सम्पूर्ण उपचार शुल्क मिनाहा गर्ने, विरामीका छोराको सम्पूर्ण स्वास्थ्य र शिक्षाको निःशुल्क व्यवस्था गर्ने, विरामीको श्रीमति तथा विरामीलाई पनि अस्पतालमै रोजगारीको व्यवस्था गर्ने तथा विरामीको जीवन विमा गरिदिने उल्लेख छ । onlinekhabar.com
Previous articleम्याग्दीका पत्रकार गौतम पुरस्कृत
Next articleकिन हुन्छ आँखा सुख्खा? यस्ता छन् ९ कारण र ७ लक्षण